PressReader - Ilanga langeSonto: 2018-10-07 - ITHENGANI EVANGELICAL IBUNGAZE IZIFUNDISWA ZAYO
ITHENGANI EVANGELICAL IBUNGAZE IZIFUNDISWA ZAYO
Ilanga langeSonto - 2018-10-07 - Izindaba - PHUMLANI GAMA
KUXWAYISWA izifundiswa ukuba ziqaphele ngobungozi bolwazi ezinalo olungagcina seluholela ekubeni zigcine seziphambene nenqubo-mgomo yokukhonza kudunyiswe amandla kankulunkulu.
Lokhu kushiwo ngusolwazi Buzeni Mathenjwa (57) obeyisikhulumi sosuku enkonzweni yebandla ithengani Evangelical Church elisemanguzi, Kwamhlabuyalingana, ngesonto eledlule ngenkathi kunenkonzo yokubungaza izifundiswa ezikhiqizwe yileli bandla kanye nokubungazwa kweminyaka engama-36 lasungulwa.
Ziyi-127 izifundiswa ebezidlubhe imiyezane yazo kule nkonzo ebuye yasetshenziswa ukugqu-gquzela intsha ukuba ikhuthalele imfundo ukuze kuzoba lula ukuhlangabezana namaphupho ayo.
Lezi zifundiswa zithole iziqu emikhakheni eminingi ehlukene.
Phakathi kwemikhakha eyehlukile kubalwa nesports Science. Iningi lezifundiswa zaleli bandla lingothisha nabahlengikazi, iningi labo elisebenzela ezikhungweni eziseduze nasemakhaya.
Echaza ngenhloso yokuhlelwa kwale nkonzo umfundisi Klaus Manzini uthe babone kukuhle ukuba kulo nyaka kubanjwe inkonzo yokubonga amandla kankulunkulu ngesibusiso sokuba leli bandla likhiqize izifundiswa eziningi ngalolu hlobo. Uthe eminyakeni eminingi bayaye babe nezinko- nzo lapho khona kubizwa zonke izaguga kanye nezingane zizophiwa okokuzijabulisa. Uthe iningi lezifundiswa zebandla liphuma emindenini edla imbuya ngothi.
“Mina ngiqale ukushumayela ivangeli ngingenalutho, ngidonsa kanzima. Kuthe ngokuhamba kwesikhathi ngathatha inkosikazi sahlala phansi sabheka ukuthi yini ezosiphilisa. Ngenhlanhla ngathola umsebenzi waseposini.
“Ngiyaye ngibatshele nabazalwane ukuthi impilo kayiqali phezulu kodwa inzima indlela eya empumelelweni. Lokhu ngikusho ngoba mina ngike ngathengisa izinkuni, ngasebenza e- bottle store ngaphambi kokuba ngiqashwe eposini.
Lapha ebandleni sikhulisa abantu kwezikamoya, ngokomnotho nangemfundo.
“Sibuyisela emiphakathini ngokuhambela imindeni eswele siyobapha izinto ezibalulekile. Nami angizenzeli okuningi kodwa kuba yibhodi lebandla elithatha izinqumo,” kusho umfundisi Manzini.
Imeya kamasipala wakwamhlabuyalingana umnu Nkulululeko Mthethwa ikhale kakhulu ngokukhulelwa kwabafundi ezikoleni, yanxusa intsha ukuba isike iphethini kwabaphambili.
“Engiyaye ngikuqaphele manje wukuthi sesiphelile isikhathi sokwethulwa kwabaholi abadume ngokuthi babeshaya induku kodwa kwethulwa abaholi abanamava emfundweni. Iyakhathaza eyokwenyuka kwezinga lokukhulelwa kwabafundi ezikoleni ngoba kubambezela ikusasa lesizwe,” kusho umnu Mthethwa.
Ugeqe amagula usolwazi Mathenjwa ngenkathi ethula inkulumo yakhe abe eyiqhuba ngaphansi kwesiqubulo esithi: “Excellence For The Glory of God” nokuyilapho khona enxusa izifundiswa zaleli bandla ukuba zenzisise okuyintando kankulunkulu.
Uchaze isimo sakhe aphuma ngaphansi kwaso. Ubonge amandla kankulunkulu ngokumbeka ezingeni akulo manje.
“Sekuyisikhathi eside ngathatha ivangeli. Ngashonelwa yinkosikazi kodwa ngihleli kulo nezingane zami. Ngibonga amandla kankulunkulu ngoba ukube kawekho ngabe angikho e-unisa.
“Ngahlengwa ngegazi. Ngicela ukuba ngigxile kini zifundiswa ngokuthi niqaphele ulwazi eninalo lunganidukisi kunkulunkulu. Ulwazi luhle futhi luyingozi. Umuntu ofundile uyethenjwa, noma ephazama abantu bayakholelwa kuye. Ngenxa yokufunda asisahloniphani, silwa nabaholi bethu emabandleni.
“Unkulunkulu ufuna simphakamise ngemfundo yethu. Thina singamanxusa kajesu. Sigqugquzela abazalwane ukuba bafunde ukuze silekelele udumo lukankulunkulu.
“Ngiyathanda nokuba sihlale ngokubheka incwadi yezaga 18:02 ngoba umuntu ofundile akamphiki ukrestu kunalokho uyamdumisa. Ngizocela ukuba kuphele abantu abagila izinceku ngolwazi abanalo,” kuphetha umathenjwa.
ISITHOMBE NGU : PHUMLANI GAMA
USOLWAZI Buzeni Mathenjwa (kwesokunxele) phambili nabaholi bebandla nezifundiswa zebandla enkonzweni yokukhuthaza ezemfundo ebandleni.